Madaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka qeybgalaya shirka hoggaamiyaasha caalamka ee Qaramada Midoobay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka qeybgalaya shirka hoggaamiyaasha caalamka ee Qaramada Midoobay
Waa markii ugu horeysay ee uu Farmaajo tago dalka Mareykankanka tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Febaraayo 2017. [Isha Sawirka: Villa Somalia]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah u safray magaalada New York ee dalka Mareykanka si uu uga qeybgalo shirka sanadlaha ah ee hoggaamiyaasha caalamku ay ku yeelan doonaan xarunta Qaramada Midoobay.
Wasiir dowlaha arrimada dibada Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr ayaa sheegay in madaxweynuhu uu kulanka ka jeedin doono khudbad, sidoo kalena uu shirar gaar-gaar ah la yeelan doono madaxda shirka ka qeybgalaysa.
Waa markii ugu horeysay ee uu Farmaajo tago dalka Mareykanka tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Febaraayo 2017.
Madaxweynaha Soomaaliya, oo sannooyin badan ku noolaa gudaha Mareykanka ayaa bishii la soo dhaafay ka noqday dhalashadiida Mareykanka.
Jarmalka oo soo gabagabeeyay howlgalka milatari ee gudaha Soomaaliya
Berlin-(Puntland Mirror) Jarmalka ayaa si rasmi ah u soo afjaray howlgalkiisii tababarada milatariga ee gudaha Soomaaliya, taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Talaado ah. Ciidamada Jarmalka ayaa si dhammeystiran u soo [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa isku diyaarinaysa soo dhaweynta Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayay qorsheysantahay in uu Axada ku yimaado Puntland safarkiisii ugu horeeyay tan iyo makii uu noqday madaxwenaha Soomaaliya bishii Febaraayo ee sanadkii [...]